सन्दीप, किरण, स्यान्टु, प्रतिमा र मानबहादुरमध्ये कसले जित्ला पिपुल्स च्वाइस अवार्ड ? |
सन्दीप, किरण, स्यान्टु, प्रतिमा र मानबहादुरमध्ये कसले जित्ला पिपुल्स च्वाइस अवार्ड ?
२०७५, ३ जेष्ठ बिहीबार ०९:५१ May 17, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड बिहीबार काठमाडौंमा हुँदैछ । एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत सबैभन्दा लोकप्रिय विधा अन्तर्गत पिपुल्स च्वाइस अवार्डमा ५ प्रतिस्पर्धी छन् ।
क्रिकेटका सन्दीप लामिछाने, फुटबलका किरण चेम्जोङ, टेबलटेनिसबाट स्यान्टु श्रेष्ठ, गल्फबाट प्रतिमा शेर्पा र भलिबलबाट मानबहादुर श्रेष्ठ मध्ये एकले पिपुल्स च्वाइस अवार्ड जित्नेछन् । यो भोटिङको आधारमा विजेता छनोट हुने विधा हो । यो विधाका विजेताले मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन् ।
सन्दीप अहिले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेलिरहेका छन् । सन्दीप नेपाली क्रिकेट टिमका लागि एक वर्षमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी हुन् । उनले राष्ट्रिय टिमबाट ३५ सहित उमेर समुह गरी कुल ८४ विकेट लिएका छन् । आईसीसी एसिया यु–१९ विश्वकप छनोटमा उनले एकै प्रतियोगितामा २४ विकेट लिएका थिए ।
कुनै पनि उमेर समूह वा राष्ट्रिय टिमका लागि एकै प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने कीर्तिमान उनले बनाएका थिए । त्यस्तै, गत वर्ष नामिवियामा सम्पन्न आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु मा १७ विकेट लिदै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए । उनले डिभिजन टु मा केन्या विरुद्ध मात्र २० रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए ।
यता, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोल रक्षक किरण चेम्जोङले एसियन कप छनोटको पाँचै खेलमा पहिलो रोजाई भएर खेलेका थिए । यस्तै किरणले माल्दिभ्सको टिसी स्पोर्ट्स क्लबबाट धिवेही प्रिमियर लिग खेलेका थिए । उनको क्लब लिग, एफए कप र प्रेसिडेन्ट कपमा उपविजेता बनेको थियो । यस्तै किरणले भारतको आईलिग मिनरेवा पन्जाबबाट खेलेका थिए । उनको टोली च्याम्पियन समेत बनेको थियो ।
मनोनयनमा परेका पाँच खेलाडीमध्ये प्रतिमा एक्ली महिला खेलाडी हुन् । प्रतिमा नेपाली महिला गल्फको एक नम्बर खेलाडी हुन् । व्यावसायिक सूर्य नेपाल गल्फ टुरको छनोट खेल्ने पहिलो महिला बनेकी प्रतिमा फाल्डो सिरिज नेपालकी उपविजेता समेत हुन् । अमेरिकी गल्फर टाइगर उडबाट प्रसंसा पत्र पाउने प्रतिमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत चर्चित भएकी थिइन् ।
भलिबलका मान बहादुर नेपाली टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् । गत वर्ष मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बंगलादेश र हङकङलाई हराउदा मानबहादुरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै गत वर्ष ६ मध्ये ५ प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीले जित्दा मान बहादुर मुख्य खेलाडी थिए । मान बहादुर एनभीए लिग र ३१ औं राष्ट्रिय भलिबल र एनभीए कपमा सर्वोकृष्ट बनेका थिए ।
त्यस्तै टेबल टेनिसका स्यान्टु कलिलै उमेरमा राष्ट्रिय च्याम्पियन बन्न सफल खेलाडी हुन् । स्यान्टुले गत वर्ष भएको ३९ औं राष्ट्रिय टेबल टेनिसमा पुरुष एकल, डबल्स र टिम स्पर्धामा स्वर्ण जितेका थिए । यस्तै ठमेल ओपनमा च्याम्पियनसिपमा पुरुष एकल र टिम स्पर्धामा च्याम्पियन बनेका स्यान्टुले पूर्णमान स्मृति टेबलटेनिसमा दोस्रो भएका थिए । बाह्रखरीबाट